डाक्टरसा’ब, महिनावारी गडबड हुँदा विवाहबारे प्रश्न किन? - चौतारीपोष्ट अनलाईन
किशोरीले आमातिर जिज्ञासु नजरले हेरिन्। सोचिन्– बिसन्चो हुनुमा यो विवाह कुरा कसरी जोडियो ? उनी ‘छैन’को संकेतमा टाउको हल्लाउँछिन्।
म एक अविवाहित केटी हुँ। केही दिनयता मेरो महिनावारी गडबड भएको छ र म जँचाउन डाक्टर कहाँ गएँ। म ढुक्क थिएँ कि डाक्टरले मेरो समस्याको समाधान गर्नेछिन्। मलाई औषधि दिनेछिन् र मेरो सहयोग गर्लिन्। तर, भयो ठीक यसको उल्टो।
उनले मलाई अचम्मलाग्दा प्रश्न सोधिन्। जस्तै– तिम्रो बिहे भयो ? तिम्रो केटा साथी छ कि छैन ? तिमी सेक्स गर्छ्यौ ? तिम्रो बाआमालाई यसबारे थाहा छ कि छैन ?
यौन स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या आउनासाथ अधिकांश डाक्टरहरू वैवाहिक अवस्थासँग जोडिएका प्रश्न सोध्ने गर्छन्। खासमा सोधिनु पथ्र्यो– तिमी यौन क्रियाकलापमा सक्रिय छौ कि छैनौ ?
दिल्लीकी २५ वर्षीया अर्शिया धर आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्दै भन्छिन्, ‘भेजाइनल इन्फेक्सन हुँदा म एक जना गाइनोकोलजिस्टकहाँ जँचाउन पुगेकी थिएँ। मैले उनीसँग सोधें, ‘कहीं यो (यौनरोग) एसटिडी त होइन ?’
(त्रिपाठीले बिबिसी हिन्दीमा लेखेको यो ब्लग स्वास्थ्यखबरकर्मी डिबी खड्काले अनुवाद गरेका हुन्)swsthyakhabarpatrika
Prevसागको सातौ दिन १८ खेलमा प्रतिस्पर्धा
Nextनेकपाले लगायो रूख कटानी र तस्करीमा प्रतिबन्ध